fe-potoana tokana ho an'ny telo fiovam-po telo, motro hafainganam-pandeha miovaova
fe-potoana tokana mankany amin'ny andalana telo miorina amin'ny hafainganam-pandeha
Ho an'ireo fampiharana izay ilana hafainganam-pandeha avo roa heny na hafainganam-pandeha ilaina, dingana tokana mankany amin'ny mpanova dingana telo na mampiasa motera AC misy Inverter na ao anaty electromagnetic ary koa misy motera borosy. motera hafainganam-pandeha miovaova dia safidy mandroso noho ny hafainganam-pandeha hafainganam-pandehan'izy ireo, fiara miovaova matetika ho an'ny maotera 3 phase ho an'ny motera 3hp 3hp, hafanana ambany ary asa tsy misy fikojakojana.
220v dingana tokana mankany 3 mpanova dingana, motera hafainganam-pandeha 2hp, motera hafainganam-pandeha miova ho an'ny grinder fehikibo, Frequency miovaova & Drive hafainganana azo ovaina, ahoana ny haben'ny vfd ho an'ny motera? Raha manana vokatra mila motera hafainganam-pandeha miovaova ny orinasanao dia mankanesa aty aminay ary hanome ny motera haingam-pandeha miovaova kalitao avo lenta sy fanaraha-maso maotera mandeha haingana izahay.
Karazan-tsolika hafainganam-pandeha miovaova
1. Mivadika haingam-pandeha mety ho an'ny familiana fehikibo
Ahoana ny fomba hanaovana ny hafainganam-pandehan'ny sander fehikibo? Manasongadina lohan-doha rotary 4-toerana sy fanaraha-maso hafainganam-pandeha miovaova. Hisy takelaka eo amin'ny moto miaraka amin'ity fampahalalana ity ary ity môtô ity dia eo an-tampon'ny kodiarana idler, motera sy fiara.
2. Ny motera hafainganam-pandeha mety haharitra
Ahoana ny fanovana ny AC Lathe Motor ho hafainganam-pandeha? Amboary ny Multi Speed ​​Turncrafter, Jet, na Delta Midi Lathe ho Workhorse Speed ​​Variable. ny motera dia hiasa amin'ny ankamaroan'ny fotoana eo anelanelan'ny 50% sy 125% ny hafainganam-pandeha.
3. Ny hafainganam-pandeha miova ho an'ny maotera 3 phase
Ny motera iray tokan-tena dia afaka mitondra mpamorona dingana telo, izay hamokatra loharano telo dingana avo lenta saingy misy vidiny lafo ho an'ny fitaovana, ny herinaratra hitondrany motera 3-phase, Variable Speed ​​Motor.
4. Ny fifehezana herinaratra mandeha amin'ny herinaratra
Isan-karazany ny maotera miovaova hafainganam-pandeha azo soloina maotera, fanaraha-maso sy kojakoja ho an'ny motera elektrika. AC Industrial Motor Speed ​​Controll amidy, VFD dia iray amin'ireo mpanera ary tsy izy irery no afaka mifehy ny hafainganana.
5. 2hp hafainganam-pandeha maotera
Ohatra ny Motor 2 hp; 3450 RPM; TEFC; 220V na 380V AC. Rehefa mandeha amin'ny 220V dia hamokatra 1.5 hp; Rehefa mandeha amin'ny 380V AC dia hamokatra heriny 2hp izy io. Ka ny 220v dingana tokana mankany 3 mpanova dingana ho hafainganam-pandeha.
6. Ny hafainganam-pandehan'ny hafainganam-pandeha
Ny mpamily haingam-pandeha V-belt mekanika dia ahafahantsika mifehy ny hafainganam-pandehan-javatra malefaka sy maharitra.
Ny fampiharana mahazatra
Simika, solika ary gazy
Servo fandavahana solika sy fampidirana solika
Taratasy sy ala
Sakafo sy sakafo, fonosana
Fametrahana toerana sy mpandroba
Indostrian-drano sy famokaran-drano